– सिन्दी सुई
चाइनाकी ली जिङ्जीले हराईरहेको आफ्नो छोराको प्रतिक्षामा तीन दशक बिताईन् । ली जिङ्जीका छोरा अपहरणमा परेका थिए र बेचिएका थिए ।
सन् १९८८ अर्थात आज भन्दा ३२ वर्ष अगाडि अपहरणमा परेका छोरा माओ यिनको खोजीमा ली जिङ्जी दिनरात लागी परेकी थिईन् । जति समय बित्तै जान्थ्यो ली जिङ्जीको आशा बिस्तारै मर्दै गईरहेको थियो । फेरि कुनै दिन छोरासँग भेट होला या नहोला तर उनको मनको कुनै कुनामा माओ यिन फर्किने झिनो आशा भने बाँकी नै थियो ।
हरेक साता छुट्टीको दिन ली जिङ्जी र उनका श्रीमान् आफ्नो छोरालाई घुमाउन चिडियाखाना लैजान्थे वा शहरको मध्य भागमा रहेको शानक्सी प्रान्तको राजधानी झियानमा उनीहरु गईहन्थे । जुन अझै पनि उनको सम्झनामा गहिरो छाप छ ।
‘एकदिन डेढबर्षका छोरा माओलाई हामीले चिडियाखानामा लगेर गएका थियौं । त्यहाँ उसले एउटा सानो किरा देख्यो । ऊ साह्रै उत्सुक भएर किरालाई हेरिरहेको थियो । त्यो किरा गड्यौला थियो । जब हामीले उसलाई चिडियाखाना बाहिर निकाल्यौं उसको हातमा त्यहि किरा थियो र मेरो अनुहारको नजिक थियो ।’ – ली बिगत सम्झिन्छिन् ।
माओ यिन, ली जिङ्जी दम्पत्तिका एक्ला छोरा थिए । किनकी चाईनामा एक बच्चा नीतिको प्रावधान थियो । र यस बिषयमा कुनै प्रश्न उठाउन पाईदैन थियो । ली चाहन्थिन्, आफ्नो छोराले धेरै अध्ययन गरोस् र सफल मानिस बनोस् । त्यसैले उनको उपनाम ज्याअ जिया राखेका थिए । जसको अर्थ हुन्छ “महान” ।
‘माओ निकै राम्रो मनका बालक थियो । निकै नै राम्रो व्यवहार थियो । चतुर, आज्ञाकारी र एक समझदार बालक थिए । खासै दुःख नदिने र धेरै रुदैन थिए माओ । त्यसैले सबैले कस्तो राम्रो र ज्ञानी बच्चा भनेर प्रशंसा गर्दथे । हरेक बिहान माओलाई एक किंडरगार्डेनमा छाडेर कामबाट फर्कदासंगै लिएर आउँथे । छोरासंग खेल्न पाउँदा निकै आनन्द आउँथ्यो,’ लि भन्छिन् ।
उनी धेरै खुसी थिईन् । ली अन्न निर्यात गर्ने एक कम्पनिमा काम गर्थिन् । फसल काट्ने समयमा उनले ग्रामीण ईलाकामा आपूर्तिकर्ताका लागी धेरै दिन शहर छाडनुपथ्र्यो । त्यो बेलामा पनि उनी ग्रामिण भेगमा थिईन् ।
एक दिन एक्कासी उनले एक टेलिग्राम प्राप्त गरिन् । त्यत्ति बेला अहिलेको जस्तो फोनको राम्रो सुविधा थिएन । ६ वटा अक्षरमा लेखिएको टेलिग्राममा अरु केहि खुलाईएको थिएन मात्र भनिएको थियो । घरमा तुरुन्तै फर्क ।
उनी भन्छिन् – ‘मलाई थाहा भएन घरमा के भईरहेको छ । हतारमा शीयान फर्किएँ । काम गर्ने ठाऊँका हाकीमले मलाई निकै नै नराम्रो खबर सुनाए । म सुन्न सकिरहेकी थिईन, हाकिमले मलाई सुनाए की मेरो छोरो कतै हराएको छ ।’
‘मेरो दिमाग त्यत्ति बेला खालि र शुन्य भयो । यो हुनै सक्दैन कि म उसलाई नभेटुँ । सन् १९८८ अक्टुवरको महिना थियो त्यो, मेरो छोरो जम्मा दुई वर्ष आठ महिनाको मात्र थियो ।’ – उनी सम्झिन्छिन् ।
लीका श्रीमान भन्छन् – ‘स्कुलबाट छोरालाई लिएर घर फर्किएर होटलमा पानी चिसो बनाउन खोज्दै थिएँ, मात्र एक दुई मिनेटको लागी मात्र छोडेको थिए । तर जब म फर्किए छोडेको ठाऊँमा छोरो थिएन ।’
एक दिन दुई दिन गर्दै हप्ता बित्यो, छोरोको पत्ता लागेन । अवस्था निकै गम्भिर बन्दै गयो । त्यसपछि उनले छोराको तस्बिरसहित लोकल पत्रिकामा बालक हराएको सूचना दिईन । तस्बिर सहित १० हजार प्रति प्रिन्ट गरेर सियानको रेलबे स्टेशन, बस स्टेशन बरिवरि टाँस्न लगाईन् । तर पनि उपलिब्ध शून्य ।
‘मेरो मुटु एक्दमै दुख्थ्यो । म ठूलो आवाजमा रुन कराउन चाहन्थें ।’ – ली भन्छिन् ।
‘मैले मेरो हृदय खाली भएको अनुभव गरे, संसार रित्तिएको जस्तो लाग्न थाल्यो ।’
जब छोराको कपडा, खेलौना, साना जुत्ता देख्थिन् उनि कता कता हराउँथिन् । त्यत्ति बेलासम्म ली बेखबर थिईन यस बिषयमा की चीनमा बालबालिका बेचबिखन एक ठूलो समस्याको रुपमा थियो ।
चीनमा द्रुत गतिमा बृद्धि भईरहेको जनसंख्याको आकार नियन्त्रण र गरिबि निवारणको प्रयासका लागी सन् १९७९ मा एक बच्चा नितिको अबधारण पेश गरिएको थियो ।
शहरमा बस्ने दम्पतिहरुले एउटा मात्र सन्तान जन्माउन सक्थे, तर गाउँका दम्पत्तिले दुई वटासम्म जन्माउन सक्थे त्यो पनि यदि पहिलो बच्चा छोरी थिईन भने । बंश चलाउन वा बुढेसकालमा सहाराका लागी उनिहरुले छोरा नै पर्खनका लागी धेरै सन्तान जन्माउन सक्दैनथे । यदि यसो गरिएमा कडा जरिवाना लाग्थ्यो र बालबालिकालाई सामाजिक सुविधाबाट समेत बन्देज गरिन्थ्यो ।
यस्तो अवधारणाले बालबालिकाहरु व्यापकरुपमा अपहरणमा परिरहेका थिए, त्यत्तिबेला बिशेष गरि बालकहरु । तर यस बिषयमा ‘ली’ अनविज्ञ थिईन् ।
छोरा हराएकोमा उनले श्रीमानलाई दोष दिईन् । चार वर्ष पछि उनीहरुको सम्बन्ध बिच्छेद भयो । तर लीले छोराको खोजी कार्यलाई कहिले छोडिनन्, हरेक शुक्रबार काम सकाएर आउँथिन् र आईतबारसम्म खोजि कार्य जारी राख्थिन् ।
आफ्नो छोरा जस्तो देखिने जो कोही देखे पनि गएर सोधखोज गर्थिन् । जिया हराएकै वर्ष अर्को एक शहर शानक्सीको एक शहरमा एक जोडि ग्रामिण दम्पतिले एक केटालाई धर्मपुत्र बनाएको उनले सुनिन् । ति बालक जिया जस्तै देखिन्थे रे ।
उनी बिहानै उठिन र हतारिँदै गईन् । ति दम्पतीको कोठा खोज्नमा धेरै समय खर्च गरिन् । रातिराति एक होटलबाट अर्को होटल र अर्को होटलबाट अर्को होटल चाहार्न थालिन् । जब उनले सहि होटल पत्ता लगाईन, ति दम्पतिले त्यो कोठा केहि समय अघि नै छोडिसकेका रहेछन् । तै पनि उनले हरेश भने खाईनन् र मध्य रातसम्म पुनः खोजि कार्य जारी राखिन् ।
पछि उनले ती महिलालाई त भेट्टाईन्, तर ति बालक उनको छोरा थिएनन्, अर्कै बालक थिए । उनी निकै नै निराश र हतास भईन् ।
ली भन्छिन्, ‘यसले मलाई निकै ठूलो धक्का लाग्यो र धेरै असर गरेको थियो । यसबाट मेरी आमा निकै चिन्तित हुनुभयो किनकी मलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्यो ।’
एक दिन एकजना साथिले उनलाई अस्पताल लगे । डाक्टरले भने – ‘म तपाईकोे शारिरिक घाउलाई त निको बनाउँछु तर तपाईको मुटुको घाउलाई म निको बनाउन सक्दिन ।’
डाक्टरका यि कुराले लीमा निकै परिवर्तन आयो । उनी रातभर सोच्न बाध्य भईन् ।
उनी भन्छिन् – ‘मैले आफ्ना भावनाहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन भने म साँच्चै पागल हुन्छु र म बौलाए भने म छोरो खोज्न सक्दिन । यदि मेरो छोरा फर्केर आयो र मलाई पागल देख्यो भने उसलाई निकै दुःख लाग्नेछ ।’
त्यसबेलादेखि लीले आफूलाई सम्हाल्न थालिन् । बिरामी हुनबाट जोगिन थालिन । आफ्नो सम्पूर्ण उर्जा पुन: भण्डारण गर्न थालिन् ।
पछि सबै जना मिलेर एक नेटवर्क गठन गरे । धेरै प्रान्तहरुमा यस बिषयमा छलफल गर्न थाले । नेटवर्कले धेरै बाटाहरु देखायो तर दुःखको कुरा अझै पनि जियासम्म पुग्ने माध्यम भने देखाएन । समग्रमा उनले १० वटा चिनियाँ प्रान्तको भ्रमण गरिन ।
लिले ‘बेबी कम होम’ नामक बेबसाईटमा स्वमंसेविकाको रुपमा काम गर्न शुरु गरिन जसले हराईरहेका बालबालिका र अभिभावकसँग पुनर्मिलनको कार्य गर्न मद्दत गथ्र्यो । त्यहाँ धेरै स्वयमसेवकहरु थिए जसले धेरैको हराईरहेका बच्चाहरुलाई घर फर्किन मद्दत गरिरहेका थिए । आफ्नो बच्चा नभेटिए पनि अरुको बच्चा भेटाईदिएर समाज सेवा गर्ने उनले ठानिन् ।
सन् २००९ मा चिनियाँ सरकारले एक डीएनए डाटाबेस स्थापना गर्यो । । जहाँ बच्चा गुमाएका जोडीहरु र अपहरणमा परेका बालबालिकाहरुले आफ्नो डिएनए दर्ता गर्न सक्दथे । यसले हजारौं नसुल्झिएका यस्ता केशहरुलाई सल्झाउन मद्दत गर्यो । । ली का अनुसार हराउनेमा धेरैजसो बालक थिए ।
तिनीहरुलाई खरिद गर्ने निःसन्तान दम्पति थिए वा त छोरीहरु मात्र भएका दम्पत्ति थिए । धेरै जसो गाउँबाट आएका थिए । बितेका दुई दशकमा ‘बेबी कम होम’ र अन्य संस्थाहरुबाट ली ले २९ जना बच्चाहरुलाई तिनका वास्तविक अभिभावकहरुसंग मिलाईन् ।
यो वर्ष १० मे मा मदर डे थियो । उनलाई शीआनको सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरोबाट एक अपत्यारिलो खबर आयो । खबरमा भनिएको थियो माओ भेटियो ।
लि भन्छिन् – ‘यो कुरालाई वास्तवमा विश्वास गरिहाल्ने आँट मलाई आएन ।’
अप्रिल महिनामा कसैले उनलाई सियानबाट बच्चा लगिएको जानकारी दिएका थिए र एक युवकको तस्बिर पठाएका थिए । लीले त्यो तस्बिर पुलिसलाई दिएकी थिईन् र उनिहरुले अनुहार पहिचान टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर उनलाई ७ सय किलोमिटर टाढा छिमेकी सिचुआन प्रान्तमा छन्तु शहरमा बस्ने एक व्यक्तिसँग चिनाए । त्यस पछि पुलिसले उनलाई डिएनए टेष्टका लागी राजी गरायो ।
मे महिनाको १० तारिकमा डिएनए टेष्ट म्याच भएको जानकारी आयो । फेरि अर्को हप्ता, फेरि दोस्रो पटक पनि डिएनए टेष्ट गराए नतिजा फेरि म्याच भयो र उनी लि कै छोरा हुन भन्नेमा कुनै शंका रहेन । जब उनको हातमा डिएनए टेष्टको रिपोर्ट पर्यो अनि विश्वास गरिन कि छोरा साँच्चै फर्किने भयो भनेर ।
अन्त्यमा, ३२ वर्ष पछि खोजी गर्ने कार्य अन्त्य भयो । १८ मे सोमबारको दिन पुनर्मिलनको लागी रोजिएको थियो । लीका छोरा त्यत्ति बेलासम्ममा वयस्क भैसकेका थिए । अनि विवाहित थिए र आफ्नै कुनै व्यवसाय चलाईरहेका थिए ।
‘भेट हुनुभन्दा पहिले मलाई धेरै चिन्ता लागेको थियो । हुनसक्छ उसले मलाई नचिन्ला वा स्वीकार नगर्ला वा सायद उसले मलाई बिर्सिसकेको होला । म एकदमै डराएको थिएँ । जब म मेरो छोरालाई अंगाल्न जान्छु तब उसले मेरो अँगालो स्वीकारेन भने ? जुन बच्चालाई ३२ वर्षदेखि म निरन्तर रातदिन नभनेर खोज्दै थिए हुनसक्छ, उसले नै मलाई आमा स्वीकारेन भने ? यो घटनाले म निकै निराश र दुखि भए,’ ली भन्छिन् ।
पुनर्मिलनको दिनमा, चीन सेन्ट्रल टेलिभिजनले एक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । जसमा लि सार्बजनिक सुरक्षा ब्युरोको समारोहमा ‘आमा’ भनेर चिनिईदै थिईन् । जुन दिन मामा, छोरा र बुबासँगै रोए ।
जब उनको छोरा खेलिरहेका थिए कसैले उनको अपहरण गरे । अपहरणको एक वर्ष पछि उनलाई सिचुवान प्रान्तमा एक बच्चा नभएको जोडीलाई बेचियो । उनका धर्म पिता माताले उनको नाम गु निंगि राखेका थिए । उनलाई एक मात्र सन्तानको रुपमा उनको पालनपोषण गरिएको थियो । उनले छन्तु शहरको इलिमेन्टरी स्कुल, मिडि स्कुल र कलेज बढेका थिए ।
अचम्मको कुरा त के भने उनका छोराले उनलाई केहि वर्ष अघि नै टेलिभिजनमा देखेका थिए र सोचेका रहे छन् कमलो हृदयकी महिला रहिछन् भनेर ।
लीलाई उनको छोराको विषयमा जानकारी दिने व्यक्ति भने अज्ञात रहेका छन् ।
उनीहरुको पुनर्मिलन पछि माओले सियानमा एक महिना बिताए, आफ्नै आमा बुबासँग । जुन समयमा आमा र छोराले पुराना आफ्ना तस्बिर हेरेर समय बिताए ।
तर दुःखको कुरा जीयालाई त्यत्ति सानो अवस्थाको कुरा याद नै भएन । धर्म आमाबुबासँगको समय मात्र उनलाई याद आयो ।
ली भन्छिन्, ‘यो यस्तो कुरा हो जले मेरो मुटु छियाछिया बनाउँछ । मेरो छोरो फर्केर आयो, मसंगै छ, तर उसले गरेको जीवनका कुनै पनि पलहरुलाई स्मृतिमा उतार्न सकिरहेकी छैन् । कस्तो विडम्बना !’
र लिलाई यो थाहा छ यो असम्भव छ तर पनि उनि यो चाहन्छिन् की आफ्नो छोरा त्यही २ वर्ष ८ महिनाकै होस् ।
‘हामी त्यहि विगतमा जान चाहन्छौं तर असम्भव छ ।मलाई अझै याद आउँछ त्यो दिनको त्यो पल कि जब हामी पहाड घुम्न गएका थियौं तब जियाले मलाई बोक्न भनिरहेको थियो । आज म त्यहि दिन कल्पना गरिहेको छु,’ – उनी भन्छिन् ।
अनुवाद र संक्षिप्तीकरण : तुलसा बस्नेत
अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले अफर गरेको भन्दा आधा सानो राहत प्याकेजमा हाउस स्पीकर न्यान्सी पेलोसीले समर्थन
अमेरिकामा कैयन राज्यमा गाँजालाई बैधानिक बनाइएपनि अमेरिकाको संघीय स्तरमा भने गाँजालाई अवैधानिक मानिन्छ । तर
छिमेकीहरुलाई ७५ लाख डलर छाडेर गइन् जर्मन महिला रेनाटा वीडल
जर्मन महिला रेनाटा वीडलले मृत्यु हुनु अगाडि आफ्नो झण्डै ६२ लाख युरो अर्थात् झण्डै ७५